मौखिक गर्भनिरोधक "मीडिया": समीक्षा र उत्पादन विवरण
आधुनिक औषधि विज्ञान को तीव्र विकास गर्न अनुमति गर्भ निरोधक चक्की मात्र हो प्रभावकारी, तर पनि गर्भनिरोधक को safest विधिहरू को एक। औषधि बनाउन कम्पनीहरु मौखिक निरोधकों को विकास मा ठूलो strides गरेका छन्। सबैभन्दा लोकप्रिय र व्यापक प्रयोग को एक सुरक्षा को माध्यम एक दबाइ "मिडिया" छ। महिला लागूपदार्थ लिने समीक्षा, यो तथ्य पुष्टि गर्छ।
दबाइ को प्रभावकारिता कस्तो छ
यस गर्भनिरोधक प्रभाव सामान्यतया को प्रयोग मापन छ पर्ल सूचकांक। यो सूचक वर्ष भर नै माध्यम गर्ने प्रयोग प्रति 100 महिला pregnancies संख्या देखाउँछ। हामी दबाइ, सूचकांक 0.2 को प्रयोगमा त्रुटि को संभावना निकाल्न भने - यो दबाइ "मिडिया" मा निहित छ भन्ने आंकडा छ। प्रशंसापत्र यसलाई प्रमाणित। साँच्चै, अन्य गैर-हर्मोन गर्भनिरोधक विधि पर्ल सूचकांक को प्रयोग एक उच्च मूल्य छ: intrauterine उपकरण - 1.4, को कंडोम -6यो 100 महिला बाहिर गर्भवती6हुन सक्छ भन्ने हो।
दबाइ को लाभ
यो गर्भनिरोधक "औसत" को चिकित्सीय लाभ उल्लेख गर्नुपर्छ। समीक्षा, दबाइ को नियमित सेवन पछि Tissues मा तरल पदार्थ अवधारणा को समस्या गायब भनेर संकेत गर्छ। यो थप वा कम धेरै महिलाहरु खतरा छ। यो तयारी र polycystic डिम्बाशय रोग, dermatological समस्या, menstrual अनियमितताहरु देखाउँछ। यी र अन्य उत्तिकै गम्भीर समस्या सक्षम हालतमा "मिद्यानमा" रोक्नुहोस्। डाक्टर को समीक्षा यसलाई पुष्टि गर्नुहोस्। एक गर्भनिरोधक रूपमा, तर पनि हर्मोन विकार कारण समस्याहरू संग लडाई मा एक अतिरिक्त उपकरण रूपमा मात्र होइन निर्धारित हो।
सुरक्षा र विश्वसनीयता "मिद्यानमा" हालतमा
गर्भनिरोधक लागि चक्की एक विश्वसनीय माध्यम मानिन्छ। तर तिनीहरूले नियमहरु र भर्ना को नियम को सख्त उत्सव को एक महिला चाहिन्छ। नियमित बाहिर बाट हर्मोन प्राप्त जो जीव, आफ्नै को उत्पादन रोक्छ। फलस्वरूप, यो दबेको र ovulation solidification खकार को गर्भाशय मा शुक्राणु को ingress रोक्छ कि हुन्छ। गर्भावस्था उत्पन्न गर्दैन। हामी म एक ट्याब्लेट को कुल सम्झना यदि गर्भनिरोधक प्रभाव सजिलै दुखी छ भनेर थाहा हुनुपर्छ। यो हर्मोन र ovulation जारी गर्न शरीर उत्तेजित गर्न सक्नुहुन्छ। फलस्वरूप, मल पछि।
साइड इफेक्ट र contraindications "औसत" दबाइ को
महिला हालतमा "मिद्यानमा" लिएर समीक्षा, को ट्याब्लेटको राम्रो सहन र व्यावहारिक कुनै साइड इफेक्ट छ भनेर रिपोर्ट गरियो। तिनीहरूले कुनै असर वजन। सावधानीहरु दबाइ "मिद्यानमा" मिर्गौला विफलता, pancreatitis, मधुमेह र धेरै अन्य रोगहरु हुन् महिलाहरु को प्रयोग गर्न लग्नु गर्नुपर्छ। यस्तो रोगबाट ग्रस्त गर्नेहरूका लागि, त्यहाँ स्वागत गर्न contraindications छन्। साथै, गर्भावस्था को समयमा पिउने उसपछि कि सजग हुन मौखिक निरोधकों हुँदैन। तपाईं एक स्त्रीरोग विशेषज्ञ परामर्श र विस्तृत निर्देशनहरू पढ्नुहोस् गर्नुपर्छ दबाइ लिएर निर्णय गर्नु अघि।
दबाइ को प्रयोग प्रतिक्रिया: "Sustanon"
"Atripla» (Atripla / Viraday): मूल्य analogues। सस्ता Atripla कहाँ किन्न?
Kenalog: निर्देशन र औषधिको खुराक
खमिर "Evitaliya": प्रयोगको लागि निर्देशन वास्तविक
Suprapol, कोलोरेक्टल क्यान्सर metastases संग एक विरामी समीक्षा
दबाइ 'dexamethasone' समीक्षा
सचेत र अचेत: परिभाषाहरू, विशेषताहरु, घटक
जम्मा बीमा। बैंकहरू को सूची जम्मा बीमा प्रणाली समावेश
गर्भावस्था को समयमा छोटो cervix
अनुकूलता: "Djufaston" र रक्सी। को जीव को सम्भव प्रतिक्रिया र विशेषज्ञहरु को राय
चेरी को वाइन: चार भिन्न मा घर नुस्खा
Thrush विरुद्ध प्रभावकारी मोमबत्ती
जो "भान्सा" मा तारा अङ्कित: अभिनेता र भूमिकाको
Vertigo - एक ... Vertigo: कारणहरू, उपचार
र तपाईं महिलाहरु को लागि एक कामोद्दीपक जहाँ किन्न थाहा?
भ्रूण को खतरनाक breech प्रस्तुति?
ग्याँस 24: इन्जिन भागहरु र भित्री
कुरिल चिया: "मनाएका जग्गा" बाट घाँसको आवेदन